Забур 130 CARS - Nnwom 130 ASCB
1Ao Awurade, mefiri ebunu mu resu frɛ wo;
2Ao Awurade tie me nne.
ma me nkotosrɛ.
3Ao Awurade, sɛ wobu yɛn bɔne ho nkonta a,
anka hwan na ɔbɛtumi agyina ano?
4Nanso, wowɔ bɔnefakyɛ;
ɛno enti wɔsuro wo.
5Metwɛn Awurade, me kra twɛn,
na nʼasɛm mu na mede mʼanidasoɔ ahyɛ.
6Me kra twɛne Awurade
sene sɛdeɛ awɛmfoɔ twɛne adekyeɛ,
sene sɛdeɛ awɛmfoɔ twene adekyeɛ.
7Ao Israel, ma wʼani nna Awurade so,
ɛfiri sɛ Awurade wɔ adɔeɛ a ɛwɔ hɔ daa
na ɔgyeɛ amapa wɔ ne mu.
8Ɔno ankasa bɛgye Israel
afiri wɔn bɔne nyinaa mu.
ASCB : Nnwom 130